निजी आवास अनुदान वितरण : चार वर्षसम्म ७ जिल्लाको नतिजा शून्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
निजी आवास अनुदान वितरण : चार वर्षसम्म ७ जिल्लाको नतिजा शून्य
भूमिराज 'पिठातोली' , २९ पौष २०७५
काठमाडौं। नेपालमा महाभूकम्प गएको चौथो वर्ष सुरु हुँदैछ। २०७२ बैशाख १२ र २९ गते गएको महाभूकम्पमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। त्यो बेला भूकम्पमा भत्किएका भग्नावशेषहरु चौतर्फी देखिएका थिए। भत्किएका भवनहरुको सबै ठाउँमा सर्भे गरियो। भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला, तथा कम प्रभावित १८ जिल्लामा गरी ३२ जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। ३२ जिल्ला मध्येका २५ जिल्लामा भने केही परिणाम देखिएको छ अन्य ७ जिल्लाको परिणाम भने शून्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण गर्नुपर्ने निजी आवासमा अनुदान वितरण गरेका ७ जिल्लामा एउटा भवन पनि निर्माण भएर हस्तान्तरण गरेका छैनन्। अनुदानको तीन वटै किस्ता रकम भुक्तानी हुँदा समेत काम नभएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भूकम्प कम प्रभावित जिल्लामा छनौट भएका कास्की, पाल्पा, धनकुटा, भोजपुर, शंखुवासभा, बाग्लुङ्ग र म्याग्दीमा हालसम्म पनि एउटा घर नबनेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ।
अति प्रभावित १४ जिल्ला, तथा कम प्रभावित १८ जिल्लामा गरी ३२ जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। ३२ जिल्ला मध्येका २५ जिल्लामा भने केही परिणाम देखिएको छ अन्य ७ जिल्लाको परिणाम भने शून्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ
मकवानपुर जिल्लामा भने कुल सर्भे ८५ हजार १ सय ८८ को गरिएको थियो। तर तथ्याङ्क अपडेट गरिएको वेव साइड अनुसार लाभग्राही सूचीमा परेका कुल संख्यालगायत पहिलो, दोश्रो, तेश्रो किस्तालगायत कुनै उल्लेख गरिएको छ।
कास्की जिल्लामा कुल सर्भे गरिएका १० हजार ७ सय ३९ निजी आवास छन्। जसमा लाभग्राही सूचीमा परेका कुल संख्या ६ हजार २६ छन्। त्यस्तै प्रवलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही संख्या २ सय ४२ छन्। कास्कीमा अनुदान सम्झौता भएका निजी आवासहरु ५ हजार ५ सय ९८ वटा छन्। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनी सम्झौता भएका निजी आवासका लागि पहिलो किस्ता अनुदान वितरण गरिएको थियो।
५ हजार ९ सय ९८ आवासका लागि नै अनुदान दिएको थियो। त्यस्तै दोश्रो किस्ता पनि १७ सय ९४ लाई दिइएको छ। कास्की जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि दिइएको रकमले आवासहरु नबनेको तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ। तेश्रो किस्ताको अनुदान पनि ८२ जनाले पाइसकेका छन् तर भूकम्प गएको ४ वर्ष सुरु हुन लाग्दा पनि कुनै घर निर्माण सम्पन्न भएको छैन। १७ सय ९३ घरहरु बन्दै गरेको तथ्याङ्कमा देखिएका छन्।
कास्की जिल्ला मात्र होइन् अन्य ६ वटा जिल्लाहरुको पनि त्यस्तै अवस्था छ। पाल्पा जिल्लामा कुल सर्भे गरिएका १० हजार ३ सय ९८ निजी आवास मध्ये अनुदान सम्झौता गरिएका ४१ सय थिए। जसमा पहिलो किस्ता ३ हजार ९ सय ७४, दोश्रो किस्ता १४ सय ३८ र तेश्रो किस्ता ९ सय १७ निजी आवासले अनुदान पाइसकेका छन् तर यो अवधीसम्म एउटा घरको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। तथ्याङ्क अनुसार भने १ हजार ८ सय २५ बन्दै गरेको देखाइएको छ।
त्यस्तै धनकुटामा भूकम्पले क्षति गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४४ सय ९१ वटा वटा निजी आजासलाई छनौट गरिएको थियो। जसमा अनुदानको सम्झौता भएका २७ सय ९९ वटा निजी आवास थिए। अनुदानबाट पहिलो किस्ता धनकुटामा २५ सय ३ आवासको लागि दिइएको थियो।
त्यस्तै दोश्रो किस्ता पनि १७ सय ५९ जना आवासले प्राप्त गरेका थिए भने तेश्रो किस्ता ३ सय ६३ परिवारले पाएका थिए तर आजको मितिसम्म पनि एउटा घर पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। निर्माण भइरहेको भने १४ सय ४२ घर छन्।
भोजपुर जिल्लामा पनि त्यस्तै छ। ९ हजार २ सय ४२ कुल सर्बे गरिएकोमा अनुदान सम्झौता भएका ५१ सय ६८ निजी आवासका लागि भएको थियो। जसमा सबै किस्ताको अनुदान पनि वितरण गरिएको छ। पहिलो किस्तामा ५ हजार ५४ आवासलाई, दोश्रो किस्ता २५ सय १ आवासलाई बितरण गरिएको छ। तेश्रो किस्ता भुक्तानी गर्नका लागि भने कुनै पक्रिया पुरा नभएर भुक्तानी नभएको देखिन्छ। त्यसै अनुसार एउटा घरपनि निर्माण सकिएको छैन। निर्माण कार्य जारी भएका आवासहरुको संख्या भने १४ सय ९१ रहेको छ।
त्यस्तै शंखुवासभा जिल्लामा पनि ४ हजार ९ सय ६६ कुल सर्भे गरिएकोमा १६ सय ८९ आवासका लागि मात्र अनुदान सम्झौता गरिएको थियो। त्यसमध्ये पनि पहिलो किस्ता १६ सय ७३ लाई वितरण गरिएको थियो। दोश्रो किस्ता ५ सय २८ र तेश्रो किस्ता ९८ आवासले प्राप्त गरेका थिए तरपनि भूकम्प गएको चौथो वर्ष सुरु हुन लाग्दा समेत एउटा आवास पनि निर्माण नभएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
बाग्लुङ्ग जिल्लामा पनि ३ हजार ८ सय १५ निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि सर्भे गरिएको थियो। त्यसमा लाभग्राही सूचीमा परेका र प्रवलीकरण सूचीमा परेकालाई छुट्याएर २ हजार १ सय ५६ आवासका लागि अनुदान सम्झौता गरिएको थियो।
बाग्लुङ्गमा सबै किस्तामा पाउने अनुदान रकम पनि धेरैले प्राप्त गरिसकेका छन् तर निर्माण सम्पन्न भने कुनैपनि भएका छैनन्। पहिलो किस्तामा २ हजार ७० ले प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै दोश्रो किस्तामा ७ सय १०ले प्राप्त गरेका थिए भने तेश्रो किस्तामा ४ सय ७ ले अनुदान प्राप्त गरेका छन्। घरहरु बन्दै गरेको सूचीमा भने ८ सय १० वटा रहेका छन्।
म्याग्दी जिल्लामा पनि कुल सर्भे गरेका १३ सय ५० वटा निजी आवासहरु थिए। लाभग्राही सूचीमा परेका ८ सय ८६, प्रवलीकरण सूचीमा परेका ७, अनुदान सम्झौता गरिएका ७ सय ८३ छन्।
त्यस्तै म्याग्दीमा पहिलो किस्ता वितरण गरिएका ७ सय ८३, दोश्रो किस्ता वितरण गरिएका २ सय ८१ र तेश्रो किस्तामा वितरण गरिएका १ सय ५१ निजी आवासका लागि अनुदान वितरण गरिएको छ। यो जिल्लामा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएका निजी आवासहरु भने एउटा पनि नरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ।